चीन सबैभन्दा लोकप्रिय रोटरी यूवी फ्लाटबेड बोतल प्रिन्टर मेशिन निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता Maishengli
सबै भन्दा लोकप्रिय रोटरी यूवी फ्लैटबेड बोतल प्रिन्टर मशीन
के सामग्री uv फ्लैटबेड प्रिन्टर प्रिन्ट गर्न सक्छन्
१. प्रिन्टि glass गिलास
किनकि शीशाको सतह चिल्लो छ, यो छाप्नको लागि गाह्रो सामग्री हो। तस्विरलाई झर्ने र फिक्काउन, आसंजन सुधार गर्न, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रिन्टि effect प्रभाव बढी सुन्दर छ कि छैन भनेर प्रिन्ट गर्नु अघि कोटि printing प्रशोधन गर्नु आवश्यक छ। प्रिन्टि glass ग्लासले विभिन्न प्रकारका मुद्रणहरू गर्न सक्दछ।
२. टाइलहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
सिरेमिक टाइल्सको विशेष प्रयोगको कारण, सिरेमिक टाइल्समा प्रिन्टिंग बान्की प्रिन्टिंग उद्योगमा सँधै समस्या भएको छ। सिरेमिक टाइल्स प्रिन्ट गर्नु अघि, जलरोधक, सूर्य प्रूफ र स्क्र्याच-प्रतिरोधी प्रिन्टि effects प्रभावहरू अझ राम्रो बनाउनको लागि कोटिंग ट्रीटमेन्टको राम्रो काम गर्नु आवश्यक छ।
तीन, मोबाइल फोन शेल प्रिन्ट गर्नुहोस्
वर्तमानमा बजारमा मोबाइल फोनका केसहरूको माग अझै अपेक्षाकृत ठूलो छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइल फोनको सुरक्षा गर्न एक नमकीन मोबाइल फोन केस रोज्नेछन्। यस्तो बजारको सामना गर्दै, धेरै व्यवसायहरू मोबाइल फोन केस प्रिन्टि and र बिक्री उद्योगमा पनि सामेल भए। तर धेरै प्रयोगकर्ताहरू कसरी उच्च सटीकता यूवी फ्ल्याटबेड प्रिन्टर छनौट गर्न सकिन्छ भन्नेमा दु: खी छन्। धेरै उत्पादकहरूले बजारमा पहिले एकल हेड प्रिन्टरहरू किन्थे। तिनीहरूलाई प्रयोग पछि, तिनीहरूले त्यस्ता उपकरणहरू केवल ढिलो मात्र नभई सटीक पनि पाए। बजार माग। हांग्जो कालको २13१13 फ्ल्याटबेड प्रिन्टरले द्रुत मुद्रणको गति, उच्च सटीक मात्र नभएर लामो सेवा जीवनको साथ पनि निर्माताको बजार माग पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सक्छ।
चौथा, छाला छापा
छालाको मुद्रण उद्योग छालाको प्रिन्टिंग उद्योगमा सँधै समस्या भएको छ। किनकि छाला तान्न मिल्ने खालको छ, छापिएको ढाँचा तानिए पछि सही हुँदैन। त्यसोभए यसमा ध्यान दिन निश्चित गर्नुहोस् जब छालाको प्रिन्टिंग गर्दै।
पाँच, प्रिन्ट विज्ञापन
विज्ञापन उद्योगले सबैभन्दा धेरै प्रिन्टि use प्रयोग गर्नुपर्दछ, र pvc र acrylic जस्ता सामग्री प्राय: विज्ञापन उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ।
मोडेल M -9060W UV सिलिन्डर + प्लेन प्रिन्टर
उपस्थिति खैरो ♦ मध्यम खैरो ब्लक गर्नुहोस्
प्रिन्टहेड Epson i3200-u / Epson 20 47२० / रिको G5i
मसी प्रकार UV मसी पहेलो रातो कालो लाइट निलो प्रकाश रातो सेतो चमकदार
प्रिन्टिंग गति (spm / h) dpi i3200u 4720
प्रिन्टिंग गति (spm / h) 720x600dpi (4PASS) १०m2 / h 9m2 / h
720x1200dpi (8PASS) 6m2 / h M मी २ / घन्टा
चौड़ाई प्रिन्ट गर्नुहोस् 940mm x 640mm
मोटाई प्रिन्ट गर्नुहोस् प्लेट प्रिन्टिंग मोटाई ०.mm मिमी * mm०० मिमी
सिलिन्डर प्रिन्टिंगको व्यास २० मिलिमिटर २०० मिलिमिटर छ
(अति उच्च अनुकूलन)
उपचार प्रणाली LV UV lamp
छवि ढाँचा TIFF / JPG / EPS / PDF / BMPW
चीर सफ्टवेयर फोटोप्रिन्ट
सामग्री प्रकार सबै प्रकारका विज्ञापन सामग्रीहरू। सजावट सम्बन्धित श्रृंखला सामग्री, धातु प्लेट, गिलास,
सिरेमिक्स, काठ बोर्ड, कपडा, प्लास्टिक, मोबाइल फोन केस, एक्रिलिक, आदि
बिजुली आपूर्ति AC220V 50HZ ± 10%
तापक्रम २०--3२ डिग्री सेल्सियस
उपस्थिति आकार (मिमी) लम्बाई / चौडाई / उचाई २०6565 मिमी / ११80० मिमी / १००mm मीमी
प्याकेज आकार लम्बाई / चौडाई / उचाई २२२० मिमी / १6060० मिमी / १२१० मिमी
डाटा प्रसारण TCP / IP नेटवर्क इन्टरफेस
नेट वजन 5050० किलोग्राम
UV प्रिन्टिंग फारम
यूभी प्रिन्टि three तीन तहमा विभाजित गरिएको छ: राहत तह, र color्ग तह र प्रकाश तह। कडा प्रिन्टि ad आसंजन, स्क्र्याच प्रतिरोध र पोशाक प्रतिरोध
उच्च गुणवत्ता र उच्च सटीक मुद्रण
एकल नोजल प्वालहरूको संख्या: १4040० (प्रत्येक प row्क्तिमा १ 180०, कुल r पows्क्तिहरू),
मसी ड्रप आकार: p pl, उच्च मुद्रण सटीकता
प्रिन्टि more अधिक सहज रूपमा चल्छ
प्रसारण किरण गाइड रेल क्रस बीम सबै-इस्पात संरचना X-axis ग्यारेन्टी छ जापानी THK डबल रैखिक गाइड रेल प्रसारण द्वारा
मसी रंगको कार्ट प्रिन्टि duringको बखत अधिक सहज रूपमा चल्दछ
दोस्रो, टाइलहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
चावल कागज र तेल चित्रमा मुद्रण।
वर्तमानमा, चावलको कागज र तेल चित्रमा मुद्रणको मात्रा अझै पनि तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ। यदि यति ठूलो रकम मात्र हातले चित्रित गरियो भने, यो धेरै ठूलो काम हुनेछ। त्यसैले धेरै सानो प्रिन्टर छनौट नगर्नुहोस्। २13१13 लगभग उस्तै हो। यदि तपाइँ एकदम सानो प्रिन्ट चौडाई छान्नुहुन्छ भने, आपूर्ति र मागले काम गर्दैन।
UV प्रिन्टर उत्पाद अनुप्रयोगहरूमा उद्योगहरू शामिल छन्:
१. विज्ञापन उद्योग: साइनेज, पीओपी उत्पादहरू, विज्ञापन उत्पादहरू, प्रदर्शनी प्रप्सन
२. घर निर्माण: सजावटी गिलास, स्लाइडि door ढोका क्याबिनेट, छत, पृष्ठभूमि पर्दा पर्खाल, वातावरणीय संरक्षण यूभी सजावटी प्यानल, सजावटी बत्तीहरू
Video. भिडियो उत्पादनहरू र सजावटी चित्रहरू: सजावटी तेल चित्रहरू, छालाका उत्पादनहरू, थ्रीडी सजावटी चित्रहरू, फोटो फ्रेम, विवाह छविहरू
Elect. इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू: घर उपकरण प्यानल, झिल्ली स्विच, निजीकृत र she खोलहरू
Ifts. उपहार र प्याकेजि:: अनुकूलित उपहार, स्टेशनरी खेलौना, प्याकेजि।
अघिल्लो: यूभी फ्ल्याटबेड प्रिन्टर सी + डब्ल्यू + वार्निश यूवी प्रिन्टर फोन केस, गिलास, सिलिन्डर बोतल बहु-तह प्रिन्टिंगको लागि
अर्को: प्रिन्टर मसी मसी बोतल प्लास्टिक सिलिन्डर फ्लटबेड यूवी प्रिन्टर
UV प्रिन्टरमा कुन सामग्री प्रिन्ट हुन सक्छ?
यसले लगभग सबै प्रकारका सामग्रीहरू प्रिन्ट गर्न सक्दछ, जस्तै फोन केस, छाला, काठ, प्लास्टिक, एक्रिलिक, कलम, गोल्फ बल, धातु, सिरेमिक, गिलास, कपडा र कपडा आदि।
के एलईडी यूभी प्रिन्टर प्रिन्ट एम्बॉसि 3D थ्रीडी प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, यसले एम्बॉसिing थ्रीडी प्रभाव प्रिन्ट गर्न सक्दछ, अधिक जानकारी र प्रिन्टिंग भिडियोहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के यो प्रि-कोटिंग स्प्रे गरिनु पर्छ?
केही सामग्रीलाई प्रि-लेप चाहिन्छ, जस्तै धातु, गिलास, आदि।
हामी कसरी प्रिन्टर प्रयोग गर्न सक्छौं?
हामी प्रिन्टरको प्याकेजको साथ म्यानुअल र शिक्षण भिडियो पठाउनेछौं।
मेशिन प्रयोग गर्नु अघि कृपया म्यानुअल पढ्नुहोस् र शिक्षण भिडियो हेर्नुहोस् र निर्देशनको रूपमा कडाईका साथ काम गर्नुहोस्।
हामी नि: शुल्क टेक्निकल समर्थन अनलाइन प्रदान गरेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दछौं।
वारेन्टीको बारेमा के हुन्छ?
हाम्रो कारखानाले एक वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्दछ, प्रिन्ट हेड, मसी पम्प र मसी कार्ट्रिज बाहेक।
प्रिन्टि? लागत के हो?
सामान्यतया, १ वर्ग मीटर को लागत को लागी $ १ को आवश्यकता छ। प्रिन्टि cost लागत धेरै कम छ।
म कसरी प्रिन्ट उचाई समायोजित गर्न सक्छु? कति उचाइ अधिकतम प्रिन्ट गर्न सक्छन्?
यो अधिकतम १०० मिटर उचाई उत्पादन प्रिन्ट गर्न सक्दछ, मुद्रण उचाई सफ्टवेयर द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ!
म स्पेयर पार्ट्स र मसी कहाँबाट किन्न सक्छु?
हाम्रो कारखानाले स्पेयर पार्ट्स र मसी पनि प्रदान गर्दछ, तपाईं हाम्रो कारखानाबाट प्रत्यक्ष किन्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको स्थानीय बजारमा अन्य आपूर्तिकर्ताहरू।
प्रिन्टरको मर्मतसत्र के गर्ने?
मर्मतसम्भारको बारेमा, हामी दिनको एक चोटि प्रिन्टरमा उर्जा दिन सुझाव दिन्छौं।
यदि तपाइँ days दिन भन्दा बढि प्रिन्टर प्रयोग गर्नुहुन्न भने, कृपया सफा तरलको साथ प्रिन्ट हेड सफा गर्नुहोस् र प्रिन्टरमा सुरक्षात्मक कार्ट्रिज राख्नुहोस् (सुरक्षात्मक कार्ट्रिज विशेष रूपमा प्रिन्ट हेडको रक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ)
वारेन्टी:12 महिना । जब वारेन्टीको समयावधि समाप्त हुन्छ, टेक्निसियन समर्थन अझै प्रदान गरिन्छ। त्यसकारण हामी आजीवन अफ्टरसेल सेवा प्रदान गर्दछौं।
प्रिन्ट सेवा: हामी तपाईंलाई निःशुल्क नमूनाहरू र नि: शुल्क नमूना प्रिन्टि offer प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
प्रशिक्षण सेवा: हामी हाम्रो कारखानामा नि: शुल्क आवासको साथ free- training दिन नि: शुल्क प्रशिक्षण प्रस्ताव गर्दछौं, सफ्टवेयरको प्रयोग कसरी गर्ने, मेसिन कसरी चलाउने, दैनिक मर्मत कसरी गर्ने, र उपयोगी प्रिन्टि technologies टेक्नोलोजी इत्यादि।
स्थापना सेवा:स्थापना र अपरेशनको लागि अन-लाइन समर्थन। तपाइँ हाम्रो टेक्निशियन अनलाइन संग अपरेशन र रखरखाव छलफल गर्न सक्नुहुन्छ समर्थन स्काइप द्वारा सेवा, हामी कुराकानी आदि रिमोट कन्ट्रोल र साइट मा समर्थन अनुरोध मा प्रदान गरीन्छ।
UV फ्ल्याटबेड प्रिन्टर सी + डब्ल्यू + वार्निश यूवी प्रिन्टर पी को लागि ...
M-9060W UV सिलिन्डर + फ्ल्याटबेड प्रिन्टर
यूभी प्रिन्टर प्रिन्टर डिजिटल Color रंग रंग यूवी एफ ...
M-2513W UV फ्लैटबेड प्रिन्टर
M-3220W UV फ्लैटबेड प्रिन्टर
बहु पोर्टेबल आकार यूवी प्रिन्टर इंकजेट फ्ल्याटबेड पी ...